22. Kuyo yonke le minyaka ngokholo lwami eNkosini ngithole izibusiso eziningi futhi ngelashwa ekuguleni. Ngakho uma kudingeka ngibe nokholo kuNkulunkulu uSomand…
Okwedlule：Sixolelwe izono zethu futhi safaneleka ngokholo eNkosini, futhi ngaphezu kwalokho, sidele izinto eziningi, sazidela, futhi sayisebenzela ngokungakhathali iNkosi. Ngikholwa ukutheni lolu hlobo lokholo luzosivumela ukuba sihlwithwe siye embusweni wezulu. Kungani uthi lokhu ngeke kusenze sithole ukungena embusweni wezulu?
UNkulunkulu Wengamela Phezu Kwesiphetho Sesintu Sonke Uma uNyazi lwaseMpumalanga luyindlela yeqiniso, kungani uhulumeni we-CCP njalo ucindezela kanzima, ubopha, futhi ushushisa ngokumelene noNyazi lwaseMpumalanga? Kungani iBandla likaNkulunkulu uSomandla lichuma ngokwengeziwe ngesikhathi amabandla eNkathi Yomusa eyincithakalo kangaka? Ngaphandle Kwensindiso KaNkulunkulu, Ngabe Angikho Lapha Namhlanje